37 Responses to “မြီးရှည်စားတဲ့ည..”
အခု မြီးရှည်တဲ့ ဗိုက်ကတော့ ဆာပြီးရင်းဆာပဲ ..။
မြီးရှည် သိပ်မစား ဖြစ်ဘူးအစ်မချော။ မြန်မာပြည်မှာ ကထည်းကပဲ။ ခုဆို ပိုဆိုးပြီပေါ့ အစာပလာ များများနဲ့လူအင်အား များများ လိုပြီဆိုတော့ကာ.... ဟူး မလွယ်ပါ။
တနင်္ဂနွေကို မွေးနေ့ ပွဲ တစ်ခု သွားရင်းကပဲ အဲ့သည်မှာ ၀ါးတီး ဖွင့်တော့မယ်။
ဂလု၊ ဂလု ၊ ဂလု လို့ သာ ၃ကြိမ် ရွတ်ဆိုပြီး ပြန်သွားပါတယ်။
ရှယ်ပဲ ရှယ်ပဲ။ စိတ်ကြီးပြီး ခုထ ချက်လိုက်ရ။
အိပ်ခါနီး လူကို ဗိုက်ဆာအောင် ညှဉ်းဆဲရက်လေတယ်။ :(
စားသွားပါပြီရှင် (နှစ်ပွဲ)း)
ရှောက်ကော၊ ပါးကော ma thi ba
တကယ်မစားရတော့လဲ ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး သွားရည်ကျသွားပါတယ်။
အရမ်းကြိုက်တယ်... လုပ်စားကြည့်ချင်တယ်...ဒါပေမဲ့ ရှောက်ကောပါးကောဆိုတာဘာလဲဟင်... မသိဘူး... ဆိုင်တွေမှာဘယ်လိုမေးဝယ်ရမလဲ
it is one of my favorite! :)
စားချင်လိုက်တာ ချောရယ်... :-(
ချွေးမလေးရေ မြီးရှည်ဆိုကြိုက်မှကြိုက် မြီးရှည်လုပ်နည်း အဆင့်ဆင့်လေးသေချာဖတ်သွားတယ်။ စားလို့ကောင်းမဲ့ ပုံလေးတွေကြည့်ရင်း ဗိုက်ဆာလို့ ဒီကနေ့ချက်ထားတဲ့ မုန့်ဟင်းခါး နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်စားလိုက်ရတယ်း))
မချော.. မနေ့ က ဝက်သားတုတ်ထိုးတွေ အကုန်စားသွားတာ အဲဒါ ခုမြီးရှည် ပြန်လျော်ပေး ဗိုက်ဆာနေပြီ...... ပြီးရင် မြီးရှည်ကို ဖဘကို ပို့ ပေးနော်...
ဟွန့်...မြင်သာမြင်ရ မကြင်ရပါလား..မြီးရှည်ရယ်း(..။
မချောကို အစ်မတော်ပြီး အိမ်ပေါ်သာခေါ်တင်ထားချင်တော့တယ်...း))))))
ကြည့်ရင်းနဲ့ဗိုက်ဆာလာလိုက်တာဗျာ။ ညနေဘက်ဝင်ကြည့်မိတော့ သွားရည်စာတစ်ခုခုစားချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်။ ကောင်းရော။
ကိုအောင်မင်းဦး >> မြီးရှည်ဝအောင်စားသွားပါရှင်..
.. အလင်းစက်ရေ >> ချက်ဖို့ ပြုတ်ဖို့ ဝါသနာပါရင် လူများများ မလိုပေါင်ကွယ်.. တစ်ယောက်တည်းချက်လည်း ဖြစ်သားနဲ့ (ပျင်းရင်ပျင်းတယ်ပြောဘာာာာား) )
အစ်မ T T Sweet >> ဂလုဂလုရွတ်ပြီး ပြန်သွားရတာ အားနာလိုက်တား)
Kyae Hnin Se Lwin >> လုပ်စားဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဝမ်းသာပါတယ်။
မမေ >> အိပ်ခါနီးလည်း မြီးရှည်ပုံလေး မြင်ယောင်ပြီး အိပ်သွားရင် အိပ်မက်ထဲမှာ စားရင်စားရမှား)
ညီမ မိစံ >> မြီးရှည်မကြိုက်တာ ထူးဆန်းတယ် သူများတွေများ ကြိုက်လိုက်ကြတာ.. ကိုယ်တိုင်လုပ်စားရင် ပိုစားကောင်းပါတယ် မယုံရင် လုပ်စားကြည့်ပါလားနော်
Anonymous နဲ့ မရိုစ့် ရှောက်ကောပါးကော ကို တင်ထားပေးတယ်နော် .. လုပ်စားကြည့်ပါလို့..
မိုးမြင့်တိမ်ရေ >> တကယ်မစားရလည်း ပုံတွေကြည့်ပြီး ဗိုက်ဝတတ်ပါတယ်း)
ညီမ ပစ်ပစ် >> ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးနဲ့ ချက်နည်းကို မှတ်ထားတယ်ပေါ့ . တစ်နေ့နေ့မှာ လက်တွေ့ အသုံးချခွင့်ရလာပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်နော်..
မိုးအိမ် >> ဟုတ်ပ ဗန်းမော်ကို လွမ်းသွားပြီပေါ့... ဗန်းမော်မှာ တို့စားခဲ့တဲ့ ဆိုင်က ချက်နည်းကို သေချာမှတ်ခဲ့တာ... အဲဒီဆိုင်လေးက ခပ်သေးသေးပေမဲ့ မြီးရှည်သိပ်ကောင်းတာဘဲ။
ယောက္ခမကြီးရေ >> နောက်တော့မှ ကိုယ်တိုင်ချက်ကျွေးမယ်နော် ဟိဟိ အဲဒီတော့မှ အပြတ်တီးပါလို့။
ညီရဲ>> ဟုတ်တယ် မနေ့က ဝက်သားတုတ်ထိုး ကုန်အောင်စားလိုက်မိလို့ မြီးရှည်ပြန်လျှော်ပေးတာလေ.. အိုကေ ဖေ့ဘွတ်ကို ပို့လိုက်မယ်
ပန်းချီရေ>> အိမ်ခေါ်ထားရင် ထမင်းကျွေးနိုင်လို့လား တို့က တစ်ရက်ကိုဆန်တစ်ပြည်ချက် ကုန်အောင်စားတာ
တော်ကြာမှ ခေါ်မိတာ မှားလေခြင်းလို့ နောင်တရနေမယ်နော်း)
ကိုဆူးသစ် >> အချက်ကောင်းတဲ့ ဇနီးချောလေး ရထားတာများ။ .ပါရမီဖြည့်ဖက်လေးရဲ့လက်ရာက ပိုပြီးကောင်းမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်.နော်.
jasmine(တောင်ကြီး) ရေ >> ပဲငပိထည့်ရင်လည်း ရပါတယ်။ အစ်မက ဆီတိုဖူးအရည်ထည့်ထားလို့ ပဲငပိမထည့်တာပါ။ ဆီတိုဖူးအစား ပဲငပိကိုသုံးလို့ရပါတယ်နော် ...
မရှင်လေး.>> ဝအောင်သာစားသွားပါ။ လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါရှင်..
အားလုံး ပျော်ရွှင်ကျန်းမာပါစေနော် အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါရှင်။
မြီးရှည် လာစားတယ် မချောရေ
ထမင်းမစားခင် ဘလော့ထဲ အပြေး လည်မိတာ မှားပြီမမရေ..ဗိုက်ဆာလို့ မြန်မြန်ပြန်မှ...:)
မနေ့က ည အိပ်ခါနီးမှ ဘလောဂ့်ဝင်ကြည့်တော့ ပိုစ့်အသစ်တွေတက်လာတာ အစားအသောက်တွေပုံလေးတွေနဲ့။ မချောရယ် နောက်ပြီး
http://www.99sanay.com/ ရယ်၊ http://www.khinoomay77.blogspot.com/ တို့ရယ်။ ဗိုက်ဆာဆာနဲ့အိပ်လိုက်ရတယ်။
မချောလို မြီးရှည်ချက်ကြည့်ဦးမယ်။ ၀က်သားအစား ကြက်သားနဲ့လည်း ကောင်းမှာပါနော်။
မြီး ရှည်ရယ် တောက် တောက် တောက် ( သရေကျသံများပါ..)
အခေါ်အဝေါ်တွေ မသိတာကို ရှင်းပြလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မချောရေ
အရင်က ဘာထည့်ထားမှန်းကို မသိတာလေ
Print တောင် ထုတ်လိုက်ဦးမယ်..
ချစ်မကြီးရယ် သွားရေတွေကိုကျလို့ စားချင်လိုက်တာနော်း)
မြီးရှည်ကို တော်တော်ကြိုက်တယ်.. မြီးရှည်အရာမှာ မန္တလေးမြီးရှည်ကို အကြိုက်ဆုံး... မချောရဲ့မြီးရှည်ကိုလည်း မြည်းကြည့်ချင်ပါရဲ့..
မြေအိုးမြီးရှည်အသေကြိုက် မချော ဗိုက်ဆာတယ်
မြီးရှည်တွေ့တာနဲ့ အပြေးပဲလာတာ. နှစ်မျိုးလုံး စားပြီးမှ ပြန်တော့မယ်။ မချောလက်ရာက ကောင်းပြီးသား ..
စားချင်လိုက်တာချောရယ်...ခုရန်ကုန်ကတရုတ်တန်းမှာလဲ အဲလိုမြီးရှည်ဖတ်မျိုးရောင်းတယ် လုပ်စားကြည့်ဦးမယ်..။
မြီးရှည်က တရုတ် မီးရှန်က ဆင်းသက်လာ မြန်မာမှုပြုထား သလားလို့၊
ချက်နည်းတင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးနော် :D
နေ့ရောညရော မြီးရှည်-တဲ့၊ ဒါဆို မြီးရှည်ဖြင့် နေထိုင်ခြင်း ပေါ့နော်..၊း) တခါတလေမှာ အခုလို အဝစားရတာ မိုက်တယ်ဗျ၊ အင်း.. မစားနိုင်တဲ့ သူတွေကတော့ ပုံတွေကြည့်၊ ကော်မန့်လေး ချန်ပြီး ပြန်ရတာ ပါပဲဗျာ...။း)
မချောရဲ့ မြီးရှည်ကြည့်ပြီး အိမ်မှာ ခေါက်ဆွဲထုတ် ရေနွေးဖြောပြီး မြိုချလိုက်တယ်..... :)
အရသာအတွက်ကတော့ မြီးရှည် မြီးရှည်လို့ စိတ်ထဲက မှတ်ပြီး စားလိုက်တာပေါ့.... ဟီး ဟီး
တော်သေးတယ်။ ထမင်းစားရင်း ဖတ်လိုက်လို့ သရေမယိုတား)
အလုပ်က အပြန် ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ အမ ရဲ့ မြီးရှည်တွေ ယူစားလိုက်တယ် ဗျာ...။စားလို့ ကောင်းမှကောင်း...။
Michelle Myat said...
အမ ... ဆီတိုဖူးကို အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟင် ... ဘယ်လို ဘူးမျိုးနဲ့လာလဲ...အဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်
ညီမလေး Michelle Myat
ဆီတိုဖူးကို အင်္ဂလိပ် fermented bean curd လို့ ခေါ်ပါတယ်... အဲဒီနာမည်နဲ့ google မှာ ရိုက်ရှာရင် ပုံတွေ ထွက်လာပါတယ်.. မြန်မာမှာတော့ ရှမ်းပြည်က လာတာမို့ ဝယ်လို့လွယ်ပါတယ်. နိုင်ငံခြားမှာတော့ တရုတ်ကထွက်တဲ့ ပုလင်းလေးတွေနဲ့ လာပါလိမ့်မယ်.. အာရှဆိုင်တွေမှာ ဝယ်လို့ ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်.. အဆင်ပြေပါစေနော်..